प्रशासकिय अधिकृत नै उपप्रमुख भनेको को हो भनेर पौठाचोरी खेलेको अबस्था छ : उपप्रमुख सिंह « Khabar24Nepal
प्रशासकिय अधिकृत नै उपप्रमुख भनेको को हो भनेर पौठाचोरी खेलेको अबस्था छ : उपप्रमुख सिंह
स्थानिय तहमा एउटा कार्यपालिका, गाउसभाले दिएको अधिकार न्यायिक समीतिको संयोजक होइन, अहिलेको संविधान २०७२ ले हामी उपप्रमुख/ उपाध्यक्षलाई दिएको स्थानिय तहको एउटा न्यायधिसको अधिकार हो ।
फागुन १, दैलेख । दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिकामा विशुद्ध कर्मचारिले हेलचक्क्तई बढेको छ, हरेक कामहरुमा विभेद गरिन्छ । गाउपालिकाका प्रमुखप्रशासकिय अधिकृत नै उपाध्यक्ष भनेको के हो र भनेर पौठाजोरि खोल्ने समस्या भएको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाकि उपप्रमुख सुस्मिता सिंहले बताईन् । आफुलाई गाउपालिकामा काम गर्न असहज भएका कुरा लगायत अन्य समसामयिक विषयमा रहेर ठाटीकाँध गाउँपालिकाकि उपप्रमुख सुस्मिता सिंहसंग खबर24नेपालका सुर्खेत संवाददाता जितेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी ।
केन्द्रिय सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० भनेर अभियान चलाएको छ ,यसमा ठाटिकाँध गाउपालिकाले पर्यटन सहभागिता जुटाउनको लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ । के के छन् योजनाहरु ?
पर्यटन वर्ष मनाउनको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले फाल्गुण ६ गते गाउँसभा तोकेका छ, हामीले गाउँसभाबाटै योजना बनाएर जादै छौ । कसरि जाने कस्ता योजना बनाउने भन्ने गाउँसभाबाट तोकेर त्यहिबाट योजना बनाएर अघि बढ्छौ । हामी गाउँसभाबाटै निर्णय गछौ
सरकारले छाउपडि अभियान मार्फत कर्णाली प्रदेश सुदुपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अभियान मार्फत थुप्रै छाउगोठहरु भत्काइयो, ठाटिकाध गाउपालिकामा छाउपडिको अबस्था कस्तो छ ? छाउगोठ भत्काउन तपाईको सक्रियतामा कति भयो ?
हाम्रो ठाटीकाँध गाउँपालिकामा त्यस्तो छाउगोठहरु भत्काउने कामहरु त भएको छैन । गाउँपालिकामा जर्जराउदो अबस्था चै रहेको छ । हामीले छाउपडि निर्मुल पार्न पहलचै गरिरहेका छौ । हामीले यो तिन वर्षको अवधिमा परिर्वतन चै गरेका छौ । परिर्वतन के छ भने मेरो नेतृत्वमा हामीले जनावर जसरि छाउगोठमा राख्ने विभेद हटाउनुपर्छ र हामी बस्ने ठाउँ सफा सग्घर हुनुपर्छ बरु हामी देवता पुज्ने कोठामा नजाउ, भान्सा कोठामा नजाउ हामीले मान्छे बस्ने ठाउँमै बस्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर मान्छे बस्ने ठाउँमै बस्नुपर्छ भनेर सुचना फैलाउने जस्ता परिर्वतन भएकै छन् । अहिले यो छाउपडि सम्बन्धि गाउपालिका भरि साठि प्रर्तिशत काम गरेको छु ।
गोठ भत्काउनु कत्तिको ठिक हो जस्तो लाग्छ, छाउगोठ त भत्काउनु भयो मान्छेको विचार कहिलेसम्म भत्काउनु हुन्छ ?
मलाई लाग्छ छाउगोठ अहिले धेरै ठाउमा भत्काइएको छ । कणाली प्रदेश तथा सुदर पश्चिमका विभन्न ठाउमा छाउगोठहरु भत्काईरहेका छन् । हामिकहाँ छाउगोठ भत्काउने काम भएको छैन । यो छाउगोठहरु भत्काएर मात्रै हुदैनजस्तो लाग्छ पहिले उनिहरुको चेतनामा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ उनिहरुको मनको डरलाई भत्काउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । छाउगोठ भत्काएर मात्र समस्याको समाधाध हुदैन जास्तो लाग्छ । हाम्रो मन छ त्यस्लाई छाउ भइसकेपछि छाउगोठमा बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ त्यो मानसिकता नहटेसम्म छाउगोठ मात्र भत्काएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन । ।
अहिले तपाईले घोषण गरे अनुसारका कामहरु भएका छन् के के भए तपाईको पहलमा ?
मेरो पहलमा गाउँपालिकामा थुप्रै कमहरु भएका छन् । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएकोले विभिन्न बजेटहरु छुटयाएको छु । छाउपडि प्रथा अन्त्यका लागि अभियाननै बनाएको छु त्यस्का लागि पनि बजेट छुट्याएको छु । विभिन्न कामहरु भएका छन् कामहरु हुदै छन् । केहि विकट टोलहरु छन् ३ र ४ नम्बर वडाहरु अलि विकटमा नै छन् । तिनलाई विषेश रुपमा हेर्नुपर्छ बजेट बाडफाड गर्दा योजना बनाउदा ति विकट वडाहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो अहम भ’मिका रहन्थ्यो । कार्यपालिकामा म त्यसरी निर्णय गरेर जान्थे ।
तपाईको गाउँपालिकामा महिलाको सहभागिता कतिकोे छ ?
महिलाको सहभागिता धेरै छ अहिले स्वयम मैलेनै उपभोक्ता समितिमा महिला सहभागिता गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भनेको छु । विभिन्न उपभोक्ता समितिमा पनि महिला राख्नुपर्छ र महिलालाई सदस्य मात्र होइन अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताब राख्दै आएको छु । समितिमा महिला सहभागिता नभएको सुचना मकहाँ आएको थियो । मैले तुरुन्त महिला राख्नुपर्छ भनेर योेजना बनाए ।
गाउपालिकामा न्यायिक समिति छ, न्यायिक समिति नै एकदमै फितलो छ भन्ने गुनासो आउछ काम नै हुदैन अनुगमननै फितलो छ भन्ने छ नी ?
साच्चैनै तपाईले जायज पश्न ल्याउनुभयो अहिलेकोे संविधानले दिएको अधिकार हो । स्थानिय तहमा एउटा कार्यपालिका, गाउसभाले दिएको अधिकार न्यायिक समीतिको संयोजक होइन, अहिलेको संविधान २०७२ ले हामी उपप्रमुख/ उपाध्यक्षलाई दिएको स्थानिय तहको एउटा न्यायधिसको अधिकार हो । साच्चै हो तपाईको पश्नको उत्तर मैले दिनै पर्छ । यो मिडियाबाट सुनोस,पढोस अझ नेपालले,कर्णाली प्रदेशले सुनोस पढोस अझ मेरा गाउँपालिकाका जनताले सुनुन पढुन । यो संयोजक पद अहिलेको संविधानले दियो । तिनजनाको समिति हुन्छ हाम्रो तर यस्बाट गाउपालिकामा कति पनि प्रभाव परेका छैन । विशुद्ध कर्मचारीले नै भनेको टेदैनन् । कर्मचारि र मुख्य त गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतले नै नटेर्ने अबस्था छ । न्यायिक समितिले बनाएका योजनाहरुनै विफल हुन्छन् प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले काम नगरिदिदाँ । हामीले न्यायिक समितिलाई यति बजेट बाडेका छौ ति योजनानै पास हुदैनन् । जनता आउदा हामी न्यायलयमा पस्यौ है अब न्यायलयको ढोकामा आइसकेपछि न्याय दिनुहुन्छ है भन्ने वातावरण छैन । जनताले एउटा निवेदन ल्याउदा पनि साझै म कहाँ आउनुहुन्छ निवेदन लेख्ने दर्ता गर्ने मान्छे समेत छैन । थुप्रै कुराहरु मैले कार्यपालिकाको धेरै बैठकमा उठाए अहिले गाउँपालिकामा विशुद्ध रुपमा कर्मचारीलेनै नटेरेको अवस्था छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले उपप्रमुख भनेको के हो भनेर पौठाचोरी खेलेको अबस्था छ । थुप्रै मिडियामा जावस ठाटीकाँध गाउपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले धेरै विभेद गर्ने गरेको कुरा सबै ठाउँमा पुगोस ।
अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा कति मुद्दा परे ति गाउँमै छलफल गर्नुभयो कि अन्त भयो ?
अहिलेसम्म ६८ ओटा मुद्दाहरु परेका छन् । ६८ मुद्दाहरुमा तिनवटा मुद्दाहरु हामीले मेलमिलाप मार्फत जिल्लामा पठायौँ । अहिले स्थानिय तहमा हामीले हेर्ने तेह्रवटा मुद्दाहरु छन् त्यो मुद्दाभन्दा अलग मुद्दा पनि आउछन् मैले सम्झाइ बुझाई गरेर यो फौजदारी मुद्दा हो यो मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन सोझै जिल्लामा जानुस भनेर पनि पठाएको छु । अहिले न्यायिक समिती धेरै अन्ययोलमा रहेको छ सबै कुराबाट विभेद गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष ज्यु गाउपालिकामा तपाई उपस्थित एकदम कम हुन्छ भन्ने गुनासो छ नी, के तपाई बाहिरकै कार्यक्रममा व्यस्त हुन जनप्रतिनिधि हुनुभएको हो ? त्यहि भएर जनताले तपाईलाई चुनेका हुन त के भन्नुहुन्छ यो विषयमा ?
पक्कै पनि त्यस्तो होइन यो गलत सुन्नमा आयो । कार्यक्रम परिरहन्छ कार्यक्रममाा जानुपर्छ । दैलेखमा पनि मेरो घर भएको कारणले केहि दिन उता विताउनुपर्छ । महिनाको दुई तिन पटक कार्यक्रम पर्ने भएकाले बाहिर जानुपर्छ त्यहि भएर गलत सुचना आयो होला ।
अहिले न्यायिक समितिमा कस्ता खालका मुद्दाहरु पर्छन ?
हाम्रो न्याय समितिममा चै कस्ता खालका मुद्दा आउछन घरायसि विवाद, झगडा, घरेलु हिंसा, जाँडरक्सि खाएर झैझगडा भएका मुद्दाहरु आउछन् सानै छदा वालविवाह गर्छ पछि पछुताएर भागेर म कहाँ आउने गरेका छन् ।
बालकोटको दुर्गा कपडा रिफाइनरी उद्योगमा आगलागी